Xildhibaan Faarax C/Qaadir oo la dhigay isbital laguna sammeeyey qallin - Caasimada Online
Home Warar Xildhibaan Faarax C/Qaadir oo la dhigay isbital laguna sammeeyey qallin
Xildhibaan Faarax C/Qaadir oo la dhigay isbital laguna sammeeyey qallin
Istanbul (Caasimada Online) – Wararka aan ka heleyno mas’uuliyiin ka tirsan baarlamaanka Somalia ayaa sheegaya in Xildhibaan Faarax Sheikh Cabdulqaadir oo ka tirsan BFS la dhigay isbitaal ku yaalla dalka Turkiga.
Wararku waxa ay sheegayaan in Xildhibaan Faarax Cabdulqaadir lagu sameeyay qaliin dhanka dhabarka, kadib markii uu kusoo kacay xanuun hore.
Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Somalia ayaa inoo xaqiijiyay in Xildhibaan Faarax uu hadda yahay mid ay xaaladiisu wanaagsan tahay, hase ahaatee uu weli ku jiro isbitaalka lagu qalay.
Waxa uu intaa ku daray in si gaara qaliinka loogu sameeyay Sinta, balse uu iminka caafimaad ahaan yahay mid aad u wanaagsan, sida uu haddalka u dhigay mudanaha aan xogtaani la wadaagnay.
Xildhibaan Faarax Sheikh Cabdulqaadir, ayaa waayadaani ku sugnaa dalka Turkiga, gaar ahaan Hooyga uu dalkaasi ka degan yahay Madaxweynihii hore ee Somalia, Xasan Sheekh Maxamuud oo ay aad isugu dhow yihiin.
Mas’uuliyiinta ka tirsan guud ahaan Dowlada ayaa inta badan howlahooda caafimaad u aada dalka dibadiisa, gaar ahaan dalka Turkiga iyo India oo Siyaasad ahaan ay isku dhow yihiin Somalia.
Ma aha markii ugu horeysay oo Xildhibaan Faarax Sheikh Cabdulqaadir uu arrimo caafimaad u tago dalka Turkiga, hase ahaatee wareegaani uu galay qaliin.